Amabango Eengozi Zendlela kunye Nengxowa-mali Yeengozi Zendlela | DSC Attorneys
Amabango Eengozi Zendlela kunye Nengxowa-mali Yeengozi Zendlela
DSC Attorneys > Xhosa > Amabango Eengozi Zendlela kunye Nengxowa-mali Yeengozi Zendlela
Ukuba wenzakele ngokumasikizi kwingozi yendlela eMzantsi Afrika, unganako ukufaka ibango lembuyekezo kwi-Road Accident Fund (RAF).
Kwakhona ungafaka ibango lembuyekezo ukuba umntu onondlayo kusapho lwakho wenzakele ngokumasikizi okanye usweleke kwingozi yendlela.
Ngubani ongafaka ibango kwi-RAF?
Ungafaka ibango kwi-RAF ukuba:
Wena okanye umtwana wakho niye nenzakala kwingozi yendlela ebingelotyala lakho ngokuyintloko
ubungumqhubi onoxanduva ngengozi leyo ebangele umenzakalo wakho kodwa wena ungengomnini wesithuthi, ibe ingozi yona ibangelwe kukungakhathali komnini waso (ngokomzekelo, umnini waso usenokuba usilele ukutshintsha ii-brake pads eziphelileyo)
ungumntwana, iqabane lomtshato, okanye elinye ilungu losapho elixhomekeke kwingeniso yomntu osweleke kwingozi yendlela
usisizalwana esisondeleyo somntu obulewe kwingozi yendlela kwaye nguwe ohlawulele umngcwabo wabo
Asingobaqhubi nabakhweli bemoto nabelori kuphela abamele bafake ibango. Ungafaka ibango naxa wenzakele njengomhambi ndleleni, ungumqhubi okanye umkhweli kwisithuthuthu.
Ukuze ube semathubeni okufaka ibango uphumelele, qhagamshelana nathi ngokucofa u-contact us eDSC Attorneys – sisebenza ngokukhethekileyo ngamabango e-RAF, kwaye iingcungela zethu zamagqwetha zisebenza ngento ethi “no win, no fee”.
Bona ukuba unalo ibango na?
E-DSC Attorneys, onke amagqwetha ethu ayaxhakazela ngamava kumthetho womenzakalo wobuqu kwaye banentaphane yamava adibeneyo okusingatha amabango e-Road Accident Fund.
Yintoni ongafaka ibango layo?
I-RAF ingakunika imbuyekezo, ukuya kuthi xhaxhe kwimida ethile ebekiweyo, ngezi zinto:
iindleko ezidlulileyo nezexesha elizayo ngenxa yomenzakalo onawo
iindleko zomngcwabo xa kungenzeka usweleke
ilahleko yexesha elidlulileyo neyexesha elizayo ngenxa yomenzakalo onawo
ukulahlekelwa yinkxaso, ukuba umntu onondlayo ubulewe kwingozi yendlela, ngenxa yokungakhathali komntu othile.
Phawula ukuba i-RAF ibonelela ngembuyekezo kuphela ukuba kukho umenzakalo omasikizi. Imizekelo yezi ngozi zezo zibangela ukuba ukukhubazeka okunzulu emzimbeni, ukulahlekelwa kukusebenza komzimba okanye ukuphulukana nemveku engekazalwa.
I-RAF ayiboneleli ngembuyekezo kwiingozi ezingekho nzulu (ngaphandle kweendleko zonyango kunye nokulahlekelwa yingeniso ngexesha ubungekho emsebenzini), okanye ngomonakalo kwizinto zakho okanye izithuthi.
Ixesha elisikiweyo lokufaka ibango
Umele ufake ibango le-RAF phakathi kwiminyaka emithathu yomhla wengozi, ukuba umntu owenze ityala uyaziwa.
Xa kwenzeka ingozi yokutshayiswa aze low ukutshayisileyo abaleke, umele ufake ibango lakho phakathi kwiminyaka emibini yomhla wengozi.
Ukuqesha igqwetha lokukunceda ngebango le-RAF
Eyona ndlela ingcono yokufumana ukuhlawulwa okungenakhethe, okusengqiqweni ngokufike ngexesha kwi-RAF kukusebenzisa iinkonzo zegqwetha elinamava, elingakwazi ukwenza uthethathethwano ne-RAF egameni lakho.
Ukongezelela, i-DSC Attorneys axhasa ilungelo lomntu ngamnye oncedwa lokuba afumane ubulungisa ngokuthi unikwe uthethathethwano lwasimahla lokuqala, ngokusebenza ngento ethi “no win, no fee”.
Sitsalele umnxeba ku 0861 465 879 okanye uthumele i-imeyili kwi form engezantsi ukuba unebango.
Sitsalele ku 0861 465 879, ncokola nathi ku WhatsApp okanye uthumele i-imeyili nge form engezantsi ukuze ubone ukuba unalo ibango.